Data Big waxaa abuuray oo laga soo ururiyey by dawladaha ujeeddooyin kale oo aan ahayn cilmi. Isticmaalka xogta this cilmi, sidaas darteed, waxay u baahan tahay repurposing.
view An qurxiyey oo cilmi bulsho imagines saynisyahan a isagoo fikrad ka dibna ururinta xogta si ay u tijaabiso fikrad in. Tani style of cilmi keenaysaa in taam ah dhagan dhexeeya su'aal cilmi-baarista iyo xogta, laakiin waa kooban sababta oo ah cilmi-gaar ah oo inta badan aan haysan waxyaabaha loo baahan yahay si ay u ururiyaan xogta ay u baahan yihiin, sida xogta badan, hodan ah, iyo qaran-wakiil. sahan oo baaxad weyn oo sidaas daraaddeed, wax badan oo cilmi bulsho ee la soo dhaafay ayaa loo isticmaalo bulshada, sida Survey Guud ee Bulshada (GSS), Maraykanka Doorashooyinka Qaranka Study (ANES), iyo Guddiga Study of Dynamics Income (PSID). baadhitaan baaxad weyn waxaa loo guud ahaan maamulaan koox ka kooban cilmi iyo waxay waxaa loogu talagalay si ay u abuuraan xogta in loo isticmaali karaa cilmi badan. Sababtoo ah oo ka mid ah gool oo ka mid ah sahan oo baaxad weyn, daryeel weyn ayaa lagu shubaa dhigaayo xog ururinta iyo diyaarinta xogta keentay in loo isticmaalo cilmi. Xogtan waa cilmi iyo cilmi.
cilmi bulshada intooda badan la isticmaalayo ilaha da'da digital, si kastaba ha ahaatee, waa aasaas kala duwan. Halkii isticmaalaya macluumaadka laga soo ururiyey by cilmi iyo cilmi, waxa uu u adeegsanayaa ilo xog in la abuuray oo laga soo ururiyey by ganacsiga iyo dawladaha ujeedooyin iyaga u gaar ah sida samaynta faa'iido ah, adeeg ah, ama maamulka sharciga ah. Kuwani ilaha xogta ganacsiga iyo xukuumadda u imid in loogu yeedho xogta weyn. Sameynta cilmi la xogta weyn ka duwan yahay samaynaya cilmi-baaris la data in markii hore abuuray cilmi. Is barbar dhig, tusaale ahaan, website bulsho warbaahinta, sida Twitter, iyadoo baadhitaan opinion dadweynaha dhaqanka sida Survey Bulshada Guud (GSS). gool weyn ee Twitter ayaa si ay u bixiyaan adeeg isticmaalayaasha iyo in faa'ido laga helo. In geeddi-socodka ah ee lagu gaarayo ujeedooyinka, kuwaas oo, Twitter abuurtaa xog muhiim u noqon kara waxbarasho dhinacyada qaar ka mid ah opinion dadweynaha. Laakiin, ka duwan Survey Bulshada Guud (GSS), Twitter ma aha horayn diirada on cilmi bulsho.
xogta weyn The dheer waa frustratingly caddayn, oo waxaa wada kooxaha wax badan oo kala duwan. Waayo, ujeedooyinka cilmi bulsho, waxaan qabaa inay tahay mid waxtar leh in la kala saaro laba nooc oo ah ilaha xogta weyn:. Diiwaanka maamulka dowladda iyo diiwaanka maamulka ganacsiga diiwaanka maamulka dowladda waa xogta la abuuray by dawladaha oo qayb ka ah hawlaha caadiga ah. noocaas ah diiwaanka loo isticmaalay cilmi-ee la soo dhaafay sida sida demographers barashada dhalashada, diiwaanka-laakiin guurka, iyo dhimasho dawladaha Waxaa sii kordhaya ururinta iyo sii daayo diiwaanka faahfaahsan foomamka analyzable. Tusaale ahaan, dawladda City New York rakibay mitir digital gudaha taxi kasta magaalada. mitir Kuwani u qoraan oo dhan cayn kasta oo xogta ku saabsan kortaan kasta taxi ku jiro darawalku, markii bilowgii iyo meesha, wakhtiga iyo goobta joogsiga, iyo lacagta. In baadhitaan aan sheegi doonaa goor dambe oo cutubkan, Henry Farber (2015) repurposed xogta kuwan si wax looga qabto dood aasaasiga ah ee dhaqaalaha shaqada ku saabsan xidhiidhka ka dhexeeya mushaharka saacaddii iyo tirada saacadaha la shaqeeyay.
Nooca labaad ee ugu weyn ee xogta weyn cilmi bulsho waa diiwaanka maamulka ganacsiga. Kuwani waa xogta in ganacsiga loo abuuro iyo ururiyaan oo qayb ka ah hawlaha caadiga ah. Kuwani diiwaanka maamulka ganacsiga waxaa inta badan loo yaqaan raad digital, oo ka mid ah waxyaabaha sida Guda su'aal search engine, posts warbaahinta bulshada, iyo diiwaanka wac ka telefoonada gacanta. Aadka, kuwaas oo diiwaanka maamulka ganacsi ma aha kuwa xaqa ah oo ku saabsan dhaqanka online. Tusaale ahaan, dukaamada isticmaala scanners hubi-baxay waxaa lagu abuuro talaabooyin-waqtiga dhabta ah ee wax soo saarka shaqaalaha. In baadhitaan aan kuu sheegi doonaa ah oo ku saabsan dambe ee cutubkan, Alexandre Mas iyo Enrico Moretti (2009) repurposed this supermarket xogta hubi-baxay in ay bartaan sida wax soo saarka ah shaqaalaha waxaa u saamaysay wax soo saarka ee facooda.
Sida labada tusaale muujinaya, fikradda ah repurposing waa aasaaska loo barashada ka xogta weyn. In aan waayo-aragnimo, saynisyahano bulshada iyo xogta saynisyahano dhowaan inuu this repurposing aad u kala duwan. saynisyahano Bulshada, kuwaas oo la caadaysteen in ay la xogta loogu talagalay cilmi shaqeeya, waa deg deg ah in la tilmaamo dhibaatooyinka la xogta repurposed halka tiray awooda ay. Dhinaca kale, xogta saynisyahano waa degdeg ah si ay u tilmaan faa'iidooyinka xogta repurposed halka iska dhego-liito ay. Dabcan, hab ugu fiican noqon lahayd hybrid ah. Taasi waa, cilmi u baahan tahay in la fahmo sifooyinka oo ka mid ah ilaha cusub ee data-labadaba wanaagsan iyo kuwa xun-ka dibna ogaado sida ay wax ku bartaan iyaga ka. Oo, in uu yahay qorshaha inta ka dhiman cutubkan. Next, waxaan ku tilmaami doonaa toban sifooyinka badan ee ganacsiga iyo xukuumadda xogta maamulka. Ka dib markii in, waxaan ku tilmaami doonaa saddex waji cilmi oo loo isticmaali karo kuwan xogta, hababka in ay si fiican u haboon in sifooyinka xogta this.